Inotarisana sei neFIDID chizvarwa chinotevera cheMacs? | Ndinobva mac
Peter Rhodes | | Mac Os X, Mac makomputa
Mushure mezvatakasangana nesvondo rino isu tiri munzvimbo yekufunga nezveramangwana rezvimwe zvigadzirwa zvemaapuro uye ndipo pakatanga kuratidzwa Apple Iyo TouchID haina kutora nguva kuendesa pfungwa kune iyo iPad uye pakupedzisira, mune yekupedzisira MacBook Pros ine Kubata Bar.
Iko kushanduka kunonzwisisika kwehumwe matekinoroji ayo, mushure mekudzoreredzwa neApple, anoitwa mumhando dzakasiyana dzechigadzirwa uye, sezvaungave watoona kare, chinonyatsokwezva Apple ndiyo ecosystem yavakagadzira.
Kana isu tikatarisa pane iyo TouchID, iwe uchaona kuti izvozvi zviripo pane iPhones, iPads uye MacBook Pro neTouch Bar. Iyo pfungwa imwechete yakashandiswa mumidziyo yakasiyana kuitira kuti tikwanise kubata chengetedzo yedu maererano nepassword nedata. Ikozvino zvadzokera pakurwiswa netekinoroji nyowani iyo yavanodaidza kuti FaceID.
Zviripachena kuti shanduko ine musoro yezvose izvi ndeyekuti muchizvarwa chinotevera cheIpad tinoona zvimwe zvacho zvichishandiswa uye ndicho chinhu chingaite kuti chigadzirwa ichi chizviise pacho pazviri izvozvi, kumusoro. Zvino, zvine musoro here kushandisa tekinoroji iyi mukombuta senge MacBook? Icho chichava chimwe chinhu icho Apple Hardware mainjiniya achafanira kudzidza kusarudza kana chimwe chinhu chakadai chichiita kuti chigadzirwa chiwedzere kana kushomeka.
Pasina kupokana Apple akazviita zvakare. Yakaisa chigadzirwa pamusika icho, kunyangwe ichiri mumatura, yatove nemamiriyoni evateveri.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac Os X » Inotarisana sei neFIDID chizvarwa chinotevera cheMacs?
Jor gtz akadaro
Masangano evasori akaita sekumeso id
Pindura Jor Gtz
Vhara kamera yekombuta yako yeApple kana iwe uchifunga kuti unogona kudzivirira maziso